Soo Iibso Qalajinta Degdega ah 2 1 Gaaban Gawaarida Ragga ee leh Jeebabka Amniga - Rar bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
$ 18.99 qiimaha joogtada ah $ 38.99
Color Black Qaadashada fudud Grey White Green Qaadashada madow
M / Madow L / Madoow XL / iftiin qarsoodi ah XXL / Daboolidda iftiinka XL / Cawl XXL / Cawl Daboolidda M / Light Daboolista L / Light XL / Caddaan XXL / Caddaan M / Cawl L / Gray XL / Cagaaran XXL / Cagaaran M / Caddaan L / Caddaan XL / Mugdi daboolid XXL / Daboolid mugdi ah M / Cagaaran L / Cagaaran XL / Madoow XXL / Madoow M / Daboolid mugdi ah Daboolista L / Dark
Qalajinta Degdega ah 2 1 Gaaban Orodka Ragga ee leh Jeebabka Amniga - M / Black gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Orodku wuxuu si weyn u hagaajin karaa caafimaadka jirka iyo maskaxda. Sida jimicsiga jimicsiga jimicsiga jimicsiga, orodka ayaa yareyn kara walaaca, hagaajinta caafimaadka wadnaha, iyo xitaa caawinta yareynta calaamadaha niyadjabka. Labadan-2-1 Jeegaanta shaashadda ee aaminka ah ayaa u oggolaanaya heerar buuxa oo dhaqdhaqaaqa iyo nashaadaad ah, oo u weyn nin kasta oo jecel cayaaraha.
2-in-1 Shots Ports Shorts waa mid fudud oo orod yar oo maro ah. Jirka ugu weyn ee laga sameeyay mesh aad u culus, neefsasho, iyo dhidid. Liner wuxuu ka sameeyay elastane, dhar tayo sare leh oo leh jilid heer sare ah, fidsan, iyo dhidid dhidid.
Shaati-gacmeedyadu waxay muujinayaan laba jeebadood oo waaweyn oo ay ku jiraan baakado qarsoon oo ku yaal jeebka midig. Liner wuxuu leeyahay jeebka qarsoon ee taleefanka si uu taleefankaaga uga dhigo meel aamin ah oo jidka ka baxo inta aad tababarka ku socoto.
2-in-1 Shots Ports Shorts waxay leeyihiin mesh liner liner dhaadheer oo ugaarsada qoyaanka isla markaana si deg deg ah u qallajiya raaxada ugu fiican iyo ilaalinta gaarka ah, taas oo ah muuqaal aad u fiican ragga. Hawo hawadu waxay ku socotaa labada dhinacba si ay u kordhiso neefsashada, iyadoo kuu qaboojineysa hawo kulul.
Shorts-yada ayaa wata jeebka qarsoon ee taleefanka si taleefankaagu u ahaado mid xasilloon isla markaana ka baxsanaya inta tababarka iyo socodku socdo.
Guntin gudaha ah ayaa khafiif ah oo qoyan.
Waxaad dareentaa qabow oo xor ah waqtiga oo dhan.
Dabayl yar ayaa dareemaysa inay fiican tahay halkaa.
Walwal badan kama qabin xoqidda iyo xajmiga.
Qaabka gaaban ayaa ka bixi doona xoqistaada si dhib yar.
Dharka labiska ayaa loo dhisay mid gaaban.
Xusuusin: 1 inji = 2.54 cm, 1cm = 0.39 inji, 1 chi = 33.33 cm. Waxaa jiri kara faraq yar oo midab ah, sababtuna tahay nidaamka kormeerka kumbuyuutarka. Iyada oo farqiga u dhexeeya habka cabbiraadda, fadlan u oggolow 1-3cm in cabbirid ballac ah
Macaamiil aad ugu faraxsan, iibsiga shay isla mar labaad!
Waxay u muuqataa mid wanaagsan oo tayo fiican kahor mashiinka dharka dhaqa
Heer sare ah. Ku habboon Mahadsanid.